अघिल्लो पाठमा सिकेका थियौं कि इस्राएल जातिले परमेश्वर उनीहरूमाथि राज्य (शासन) गरेको चाहेनन् (१ शमूएल ८:७) तिनीहरूले प्रभुलाई आफ्नो राजा र शासक हुनलाई अस्वीकार गरे।
मानिस कुनै न कुनै व्यक्ति वा कुराले शासन गरिनैपर्छ।
ऊ या त
परमेश्वरको शासन मुनि हुन्छ स्वतन्त्रता
या त ऊ निम्न शासकहरूको शासनमुनि हुन्छ:
धेरै अगाडि परमेश्वरले कयिनलाई चेताउनी दिनुएको थियो, यदि उसले पापमाथि अ ______________ गरेन भने, पापले उसलाई अधीनमा पार्नेछ र नाश गर्नेछ (उत्पत्ति ४:७)! इस्राएलका धेरै राजाहरू परमेश्वरको शासनमुनि आफूलाई अधीनमा राखेनन् (पाठ ६) उनीहरू आफ्नै इच्छा गर्न चाहन्थे र आफ्नै राजा बन्न चाहन्थे। धेरै वर्षसम्म परमेश्वरले धैर्य गर्नुभयो र आफ्ना जातिमाथि दण्ड पठाउनुभएन। अन्तमा, परमेश्वरले आफ्नो दण्ड थामिराख्‍ने सीमा नाघेपछि, परमप्रभुले विदेशी शत्रुहरूलाई उनीहरूको देशभित्र पठाउनुभयो। तब व्यवस्था २८:१५-६८ को परमेश्वरको पूर्वचेताउनी बमोजिम इस्राएलीहरू पक्राउमा परे र विदेशीहरूको दास बन्न पुगे! यसरी लगिनेमा उत्तरमा रहेको “इस्राएल” राज्य पहिला पर्‍यो र पछिबाट दक्षिणको “यहूदा” राज्यपनि कैद गरी लगियो।
बेबिलोनीहरूले यहूदाबाट पक्रेर कैदगरी लगेका व्यक्तिहरूमध्ये दनियल एक थिए जो परमप्रभुको भय मान्ने र उहाँलाई प्रेम गर्ने एक जवान थिए। उनी वास्तवमा परमप्रभुको कैदी थिए! दनियलको पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा, बेबिलोनको राजा (नेबुकदनेसर) ले एउटा सपना देखे। यसको अर्थ खोल्न दनियल बाहेक अरु कसैले सकेनन्। उक्त सपनामा राजाले एक विशाल मूर्ति (सालिक) देखेका थिए। त्यो सालिकले चार विशाल सांसारिक राज्यहरूको चित्रण गर्दछ जुन राज्यहरू मसीह (ख्रीष्ट) राजा भएर नआउन्जेल एक पछि अर्को गर्दै उत्थान र पतन हुनेछन्।
यी ठूला राज्यहरूको समयमा, इस्राएलका सन्तानचाहिँ अन्यजातिहरू (अन्य राष्ट्रहरू) को शासनमुनि पर्छन्। बाइबलमा यस समयलाई “अ ________________को __________” (लूका २१:२४) भनिन्छ। उनीहरूको पापको कारण र परमेश्वरको शासनलाई अस्वीकार गरेको कारण, इस्राएल अन्य राष्ट्रहरू र जातिहरूद्वारा पक्राउ परे र उनीहरूको शासनमुनि परे।
दनियलको दोस्रो अध्यायले संसारको राज्यहरूलाई मानिसको दृष्टिकोणबाट बयान गर्छ। मानिसको नजरमा ती राज्यहरू बहुमूल्य धातु र पत्थरहरूले बनेको विशाल र वैभवशाली मूर्तिको रूपमा देखिन्छ। राजाको सपनामा देखिएको त्यो मूर्ति यस प्रकारको थियो:
इस्राएलीहरू बेबिलोनी शासकहरूको अधिकारमुनि बस्नुपर्‍यो। पछि गएर (एज्रा र नेहम्याहका समयमा) उनीहरू पर्सियाका शासकहरूको अधिकारमुनि परे। त्यसपछि उनीहरू ग्रीकशासकहरूको अधिकारमुनि परे। नयाँ नियमको समयमा उनीहरू रोमीशासकहरूको अधिकारमुनि थिए। यिनै चार राज्यहरू अर्थात् विश्वका सम्राज्यहरू दनियल ७ अध्यायमा परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएका छन्। परमेश्वरको नजरमा ती राज्यहरू डरलाग्दा जंगली जनावरहरू जस्तै देखा पर्दछन्:
४) एक डरलाग्दो भयानक पशु
सयौं वर्ष इस्राएल जनावरहरूअर्थात् अन्यजातिका दुष्ट शासकहरूद्वारा शासन गरिँदै आए। आजको दिनसम्म पनि विश्वका राष्ट्रहरूको बीचमा यहूदीहरूको त्यही हालत छ। इस्राएलले परमेश्वरलाई आफ्नो राजा र शासक भनी अपनाउन अस्वीकार गरेको कारण उनीहरूले धेरै दुःख पाउँदै आएका छन्।
आज विश्वलाई हेर्दा, के राष्ट्रहरू एकले अर्कोलाई “निल्ने” गरेको पाइन्छ? ____________। के तपाईं भविष्यको सबभन्दा महान् राज्यको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ (दनियल २:४४;७:१३-१४; प्रकाश ११:१५)? ______________।
तपाईं नि? तपाईंको हृदयमा कसले राज्य गर्दै छ, के तपाईंलाई थाह छ? थाह छ भने कसले? ____________। तपाईंको जीवनका राजा को हुनुहुन्छ? _____________। तपाईं कसको नियन्त्रणमुनि हुनुहुन्छ? तपाईंको हृदय पापको कैदमा छ कि तपाईं प्रभुको सेवाका निम्ति उहाँद्वारा मुक्त (स्वतन्त्र) हुनुभयो? के तपाईं पापी मानिसहरूको वा आफ्नै पापी हृदयको वा पापको वा शैतानको कैदी हुनुहुन्छ कि ख्रीष्टयेशूको कैदी हुनुहुन्छ? के उहाँले तपाईंको हृदयलाई आफ्नो निम्ति जित्‍नुभयो? के उहाँले तपाईंको तन-मन-धनलाई आफ्नो बनाउनुभयो? के उहाँले तपाईंको जीवनमा नियन्त्रण गर्दैहुनुहुन्छ? के उहाँले तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ?